Xaflad loo qabtay soo celinta safaarada Somalia ee Biljium iyo Axmed Saleebaan Dafle oo ka hadlay - iftineducation.com
iftineducation.com – Iyadoo 20-ka bishan Safaaradda Soomaaliya ee Biljamka ku guuleysatay iney dad sharci daro ku deganaa dhismaha Safaaradda ay ka saarto ayaa waxaa munaasabad lagu soo dhoweynayay arintaasi ay ka dhacday dhismaha xarunta Safaaradda, waxaana kasoo qeybgalay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Biljamka, Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub iyo Talyaaniga Ambassador Nuur Cadde.
Munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabisay Safaaradda Soomaaliya ee Biljamka iyo Jaaliyadda Soomaalida ayaa waxaa si diiran loogu soo dhoweeyay guusha Safaaradda, waxaana dadkii kasoo qeybgalay ka mid ahaa Sereeyo Guuto Axmed Saleebaan Dafle oo ka mid ahaa Golihii sare ee Kacaanka xilal kala duwana kasoo qabtay dowladdii Kacaanka.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Biljamka ayaa balan qaatay iney ka qeyb qaadanayaan sidii dayactir loogu sameyn lahaa dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee Biljamka.
Doodo iyo aragtiyo kala duwan oo jaaliyada ay ka qabeen qaabka loo abaari karo dayactir lagu sameeyo safaaradda ayaa markii danbe waxay isku raaceen in ay sameysteen gudi u istaaga dhismaha Safaaradda oo isku xeraya soomaalida iyo Safaaradda.
S/Guuto Axmed Saleebaan Dafle ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay tallaabadda looga saaray dhismaha Safaaradda dadkii sharci darada ku deganaa, isagoo u mahad celiyay Safiirka Soomaaliya ee Biljamka iyo dadkii kale ee ka shaqeeyay in dhismaha Saafaaradda soo gasho gacanta Dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Axmed Saleebaan dafle in dadka laga saaray dhismaha Safaaradda in ay la macno tahay sharaftii iyo sumcaddii Soomaaliya ay ku laheyd caalamka oo dib u soo noqotay, taasina ay muujineyso guusha Safaaradda laga gaaray.
Sidoo kale wuxuu ka codsaday Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Ambassador Nuur Cadde in uu ka shaqeeyo xooggana saaro sidii dhismaha kale ee looga talagalay Safiirka ee ku yaal magaalada Brussels in laga saaro dadka degan sida looga saaray dhismaha safaaradda.
Laakiin Ambassador Nuur Cadde oo la hadlayay jaaliyadda Soomaalida ayaa sheegay in meel wanaagsn ay mareyso howsha ka saarista dadka degan guriga Safiirka, isagoo rajo ka muujiyay in sida ugu dhaqsaha badan looga baxo, ayna haystaan ballan qaad ah in ay ka baxayaan dadka degan dhismaha Safaaradda.
Wuxuu kaloo S.Guuto Axmad Saleebaan Dafle uu ku amaanay Ambassador Nuur Cadde dadaalada uu u galay badbaadinta dhismooyinka Safaaraddaha Soomaaliya ee Biljamka iyo Talyaaniga, wuxuuna ku dhiiri geliyay in uu sii wado badbaadinta iyo dib u habeynta dhismooyinka Safaaradaha Biljamka iyo Talyaaniga.
20-ka bishan ayaa si sharciga waafaqsan looga saaray dhismaha Safaaradda dad ajnabi ah oo si sharci daro ku deganaa dhismaha safaaradda, iyadoo tallaabadani ay noqotay mid meel walbo laga soo dhoweeyay.